Ihowuliseyili Swimming Float, Draw Drawing String Bag, Drawstring Pouch, Protective Packaging Manufacturer, Factory - Shenzhen Yuanjie Packing Products Co., Ltd
Ityala likaEva Foam
Malunga Ukupakisha iimveliso zeShenzhen Yuanjie Co., Ltd.
I-Shenzhen Yuanjie ine-10 iminyaka amava ngobuchule anikezela kuluhlu olubanzi lokusingqongileyo iingxowa ezinobungane zoyilo ezinomtsalane kunye neendleko ezifanelekileyo iibhegi kubandakanya Iingxowa jewelry, izithambiso Bags, ibhegi zokwazisa, Ibhegi yesipho, ibhegi yesat, ibhegi yejute, ibhatyi yomqhaphu, iiNgxowa zokuthenga, iiBhegi zaseBhayi njl. Izinto eziphambili zeebhegi zethu yiCotton, i-Organza, i-Satin, i-Nonwoven, Ivelvet, ijute, iNylon kunye nePolyester.
Iinkcukacha ezikhawulezayo zokuPakisha kunye nokuhanjiswa kwesiko eshicilelweyo yesandi seKhrismesi, ibhegi yesiko sevelvet yesipho Inkcazo yeMveliso Ukucaciswa kweMveliso: â ™ ¦ Izinto: velvet, isati......
Ingxowa yeZipho zeVelvet
Iinkcukacha ezikhawulezayo zokuPakisha kunye nokuhanjiswa kwe-Eco ibhulukhwe yothuli yezihlangu ezinemigca yokutsala, ibhegi yezihlangu, ibhegi yokutsala ibhegi yothuli ibhegi yehoseyile Inkcazo yeMve......
Ingxowa yeVelvet yezihlangu
Iinkcukacha ezikhawulezayo zokuPakisha kunye nokuHanjiswa kweSiko eliNcinci lokuTsala iVelvet yePen yeNgxowa yokupakisha Inkcazo yeMveliso Ukucaciswa kweMveliso: â ™ ¦ Izinto: velvet, isatin, umqhaphu......
Iphepha leVelvet yePen
Iinkcukacha ezikhawulezayo zokuPakisha kunye nokuHanjiswa koMgangatho oLungileyo weSuffe Suede Ilaphu yeeNgxowa zeMveliso yeeNkcukacha zeMveliso: â ™ ™ Izinto: velvet, satin, umqhaphu, ijute, umnatha ......
Isuti yengubo yeSuede
Iinkcukacha ezikhawulezayo Ukupakisha kunye nokuhanjiswa kwesiko eshicilelweyo yomtya wevelvet enelogo yesilivere, ibhegi yesiko yevelvet yesipho Inkcazo yeMveliso Ukucaciswa kweMveliso: â ™ ¦ Izinto:......
Umtya weVelvet Bag
Iinkcukacha ezikhawulezayo Ukupakisha kunye nokuhanjiswa kwe-eva enkulu ebunjiweyo kwimeko enzima yokukhusela kunye nokupakisha iinkcukacha ze-EVA: uphawu: 1. Uyilo olwenziwe ngokwezifiso lwamkelwe. u......
Imeko zoKhuseleko zikaEva
Iinkcukacha ezikhawulezayo zokuPakisha kunye nokuHanjiswa koMgangatho amatyala anzima eva athengiswa ngeenkcukacha ze-EVA: uphawu: 1. Uyilo olwenziwe ngokwezifiso lwamkelwe. 2.Izinto: I-EVA Foam eneNo......
Amatyala ezixhobo zeEva zoNyango
Iinkcukacha ezikhawulezayo zokuPakisha kunye nokuHanjiswa kwetyala le-EVA lokufaka amagwebu kwiinkcukacha ze-EVA zokubamba: uphawu: 1. Uyilo olwenziwe ngokwezifiso lwamkelwe. umbala kunye neMibala eya......
Ityala lika-Eva lokujonga
I-Embossed: Inkcazo kunye nokusetyenziswa kweefonti
Ngokubanzi, "i-embossed" ichaza into equlathe imifanekiso okanye ushicilelo oluphakanyiswe ngaphezulu komqolo othe tyaba.
Isetyenziselwa ntoni Ilaphu leMuslin?
Ilaphu laseMuslin lilaphu elithambileyo, elilukiweyo, nelingabizi mali lihlala lenziwe ngomqhaphu, Inenani eliphantsi lokufumana ii-hreads ezingaphantsi kwe-160 nge-intshi nganye yesikwere, ngokwewebhusayithi yeF Fabrics Manufacturers, ekwaqaphela ukuba i-muslin yavela kwisixeko IMosul, Iraq.
Iibhegi eziMiselweyo zaMva nje !!!
Le inkampani yethu yakutya esandula kuyilwa isetyenziselwa ukupakisha iti
Ulwazi lwePocket Beam
Ipokotho ye-Beam yaziwa ngokuba ziipokotho zokurhoxisa, ipokotho yokutsala, ukutsala ibhegi yentambo, ipokotho engqongqo kukuthatha zonke iintlobo zepokotho yomtya,
Idilesi: Idilesi: 2 / F, Ukwakha 2, Quanxinyuan park mveliso, Huafan indlela, Dalang street, Baoan dist, Shenzhen
@Copyright 2014-2020 Shenzhen Yuanjie Ukupakisha Iimveliso Co, Ltd.